५२ पुगे कोरोना संक्रमित, डिस्चार्ज भए १६ जना – Holistic Monthly : A Leading Magazine for Health & Life Style
५२ पुगे कोरोना संक्रमित, डिस्चार्ज भए १६ जना
नेपालमा कोरोनाभाइरसका संक्रमित ५२ पुगेका छन् । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर उपचारपछि निको भई घर फर्कनेको संख्या १६ पुगेको छ । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत रौतहटका १९ वर्षीय युवक कोरोना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
ती युवक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको १२औं दिनमा निको भई डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही अस्पतालमा उपचाररत अरु तीन जना पनि डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले आइतबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् ।
अब धनगढीमा १ जना, वीरगञ्जमा ३ जना, भरतपुरमा १ जना र विराटनगरमा ३० जना गरी ३५ जनाको उपचार भइरहेको र सबैको अवस्था सामान्य रहेको डा. देवकोटाले जानकारी दिए । आइतबार वीरगञ्जकै २ जना र झापामा थप एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५२ पुगेको छ ।